UleFone T2 Pro iyo Ulefone X: Tilmaamaha, Qiimaha iyo Siidaynta | Androidsis
Ulefone T2 Pro iyo Ulefone X: Ulefone bartamihiisa cusub
Eder Ferreno | | Mobiles, MWC, Ulefone
Nooca Shiinaha Ulefone waa mid ka mid ah martida badan ee MWC 2018. Subaxnimadii maanta waxay ku soo bandhigeen labadooda taleefan cusub munaasabada taleefanka ee caanka ka ah magaalada Barcelona. Gaar ahaan, waxay soo bandhigeen dhowr taleefano dhexdhexaad ah. Waxaan tixraaceynaa Ulefone T2 Pro iyo Ulefone X. Midkii hore wuxuu ballanqaaday inuu noqonayo calankiisa cusub, halka kan dambe uu dhiirrigeliyay iPhone X.
Marka waxaan arki karnaa in sumadda Shiinaha ay nooga tagtay noocyo badan oo kala duwan iyo laba taleefanno xiiso leh oo ballan qaadaya inay siinayaan wax badan oo looga hadlo. Maxaa intaa ka badan, Waxaan horeyba u ogaanay qeexitaanada Ulefone T2 Pro iyo Ulefone X. Maxay taleefannadan noo hayaan?
Ulefone waa astaan ​​sumcad weyn ka helaysa adduunka oo dhan. Marka joogitaankaaga MWC 2018 wuxuu aadi karaa waddo dheer xagga helitaanka soo-gaadhis dheeraad ah. Intaa waxaa dheer, sumadda waxay soo bandhigeysaa laba taleefan oo kuwa dhexe ah, ee aad ugu raaxaysato si raaxo leh. Wax badan ayaan kaaga sheegi doonaa taleefan kasta shaqsi ahaantiisa.
Telefoonkan ayaa loogu talagalay inuu noqdo astaanta cusub ee summada Shiinaha. Qalab dhameystiran oo leh naqshad wanaagsan oo ka muuqda inta ka hartay taleefannada ku jira buugiisa. Marka rajo badan baa la saaray. Kuwani waa qeexitaannada qalabka:
Faahfaahinta farsamada Ulefone T2 Pro
Nidaamka hawlgalka Android 8.1 Oreo
Screen 6.7 inji oo leh xal FHD +
Gacaliye Helio P70 Octa core
Kaydinta gudaha 128 GB
Kaamirada gadaal Dual camera 21 MP + 13 Xildhibaan
Kaamirada hore 16 MP
Xuduudaha kala duwan 4G 3G LTE WiFi 802.11 a / b / g / n / ac Bluetooth 4.1
Tilmaamo kale Akhristaha faraha faraha ee ku dhexjira shaashadda aqoonsiga wajiga
Cabbirada 78.3mm x 165.9mm x 7.7mm
Peso Gram 159
Sida aad u jeeddo, Qalabkani wuxuu noqonayaa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee ay soo saartay sumcadda Shiinaha illaa iyo hadda. Markaa runti waxay noqon kartaa taleefan si fiican wax u iibiya oo si guul leh suuqa uga socda. Intaa waxaa dheer, waxay noqoneysaa mid ka mid ah taleefannada gacanta ee ugu horreeya suuqa la shaqee Helio P70 ka processor ahaan. Processor kaas oo aan ku ogaanay xogaa maalmahan. Taasina waxay u muuqataa inay tahay processor-kii ugu fiicnaa ee ay MediaTek samaysay ilaa hadda.
Sidaa darteed, tan Ulefone T2 Pro waxay na siinaysaa awood, waxqabad wanaagsan iyo tamar wanaagsan. Maxay dhammaan isticmaaleyaashu weydiistaan ​​taleefan. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay baytari weyn, kaas oo siin doona madax-bannaani badan.
Sidoo kale, Faahfaahin kale oo taleefankan ah oo bixin doonta waxyaabo badan oo laga hadlo waa dareenka sawirka faraha ee ku dhex jira shaashadda. Tani waa wax ay magacyadu muddo isku dayayeen. Marka waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko sida ay ugu shaqeyneyso qalabkan ka imanaya astaanta Shiinaha. Ulefone T2 Pro sidoo kale wuxuu leeyahay aqoonsi wajiga ah.
Meesha labaad waxaan kaheleynaa taleefankan oo naqshadiisa ay kujirto iPhone X. Tan iyo markii magaca Shiinaha uu doortay shaashad aad ugu eg taleefanka. Wax shaki ku abuuri doona faallooyin badan macaamiisha. Kuwani waa tilmaamaha qalabka.
Faahfaahinta farsamada Ulefone X
Screen 5.85 injiin ah oo leh 18: saamiga 9 iyo xallinta HD +
Gacaliye MT6763 Octa-core by MediaTek
Kaamirada gadaal Dual camera 16 MP + 5 Xildhibaan
Kaamirada hore 13 MP
Tilmaamo kale Akhristaha faraha gadaal
Batariga 3.300 Mah
Sida aad u jeeddo, Qalabkani wuxuu doortay shaashad la mid ah ta iPhone X. Maaddaama ay xitaa leedahay darajada sare. Faahfaahin u muuqata inay caan ku ahayd suuqa, maxaa yeelay waxaan aragnaa sida noocyada qaar ay isugu dayaan inay ugu daydaan. Haddii kale waxaa na horyaalla kala-goyn dhexdhexaad ah, oo leh kamarad gadaal wanaagsan iyo guud ahaan qeexitaanno wanaagsan.
Kuwani waa xilligan labada xog ee muhiimka ah ee aynaan ka ogayn labada telefoon ee Ulefone. Astaantu wali kamay hadal qiimaha ay labadan aalad ku gaadhayaan suuqa ama taariikhdooda suurtagalka ah ee la bilaabayo. Ma ogin haddii la shaacin doono maanta ama goor dambe toddobaadkan. Laakiin, waxaan dheg u noqon doonnaa waxa ay sumaddu ku dhawaaqeyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Ulefone » Ulefone T2 Pro iyo Ulefone X: Ulefone bartamihiisa cusub
Tani waa ogeysiis rasmi ah oo rasmi ah ee Galaxy S9